हाइड्रोपावर(Hydropower) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
काठमाण्डौ। ऊर्जा डेभलपर्सको सम्बद्ध संस्था सामलिङ्ग पावर कम्पनीद्वारा इलाम जिल्लामा निर्माण सम्पन्न ९.५१ मेगावाट क्षमताको माइबेनी जलविद्युत आयोजनाले व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको छ। ऊर्जा डेभलपर्सको नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जा विकास गर्ने उद्देश्यको पहिलो सफलताका रुपमा माइबेनीले विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) बमोजिम व्यापारिक...
सानिमा माई हाइड्रोपावरको वार्षिक साधारणसभा कात्तिक ११ मा, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाण्डौ । सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेडले १० औँ वार्षिक साधारणसभा डाकेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिले आउँदो कात्तिक ११ गते वार्षिक साधारणसभा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा काठमाण्डौको सुकेधाराचोकस्थित सेलिब्रेसन हाइटमा बिहान ११ बजेदेखि भर्चुअल माध्यमबाट हुनेछ। सभाले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित चुक्तापुँजीको कुल १०.५२६३...
काठमाण्डौ । ङादी ग्रुप पावर लिमिटेडले आफ्नो आठौँ वार्षिक साधारणसभा आज असोज ३ गते डोकेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको गत साउन ३२ गते बसेको बैठकले वार्षिक साधारणसभा असोज ३ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोहीअनुसार आज काठमाण्डौको अनामनगरस्थित क्विन्स क्याफेमा कम्पनीले वार्षि साधारणसमा बिहान ९ बजेबाट सुरु हुनेछ। सभाले आर्थिक वर्ष...
–राजकुमार पराजुली काभ्रे । सुनकोशी–तेस्रो (६८३ मेगावाट) विद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ। यसका लागि नेपाल सरकारका प्रस्तावमा बङ्गलादेश सरकारले आउँदो डिसेम्बरमा आयोजना निर्माणस्थल काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप र सिन्धुली जिल्लाको सिमाना भएर बग्ने सुनकोशी नदी अन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोक र रामेछाप...
काठमाण्डौ । अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षका लागि लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। कम्पनीले लाभांश वितरणपछि कायम हुने चुक्तापुँजीको ५० प्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको आज भदौ ३१ गते बसेको बैठकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीहरुलाई चुक्तापुँजीको कुल १०.५२६...
काठमाण्डौ । नेपाल र बंगलादेशका सहसचिवस्तरीय बैठकले प्रस्तावित दुई ठूला आयोजनामध्ये एक परियोजनालाई संयुक्त लगानीमा निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको छ। बंगलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट कूल नौ हजार मेगावाट बिजुली लैजान चाहेको छ। बढ्दो ऊर्जाको माग सम्बोधन गर्न स्रोतको खोजीमा रहेका बंगलादेशले नेपालसँग सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रमा...
अपर तामाकोशीले डाक्यो एकैपटक २ वर्षको वार्षिक साधारणसभा, यस्ता छन् अजेन्डा
काठमाण्डौ । अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडले दुई आर्थिक वर्षको वार्षिक साधारणसभा एकैपटक डाकेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको भदौ १७ गते बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ को १२ औँ र १३ औँ वार्षिक साधारणसभा आउँदो असोज १९ गते डाकेको हो। सभा काठमाण्डौको दरबारमार्गस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा भर्चुअल माध्यमबाट बिहान ११ः३० बाट...
बाढीपहिरोको वितण्डा : प्रशारण लाइनको टावर ढलेपछि ४ जलविद्युत् आयोजना बन्द
म्याग्दी । प्रशारण लाइनको टावर ढलेपछि म्याग्दी, मुस्ताङ र पर्वतमा सञ्चालित चार जलविद्युत् आयोजनाका उत्पादन बन्द भएका छन्। पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–८ चुवामा प्रसारण लाइनको टावर ढालेर म्याग्दीका दुई, पर्वत र मुस्ताङका एक/एक आयोजनाको ७०.६ मेगावाट विद्युत् प्रसारण प्रणालीबाट विच्छेद भएको हो। मोदीखोला–१ जलविद्युत् आयोजनाको...
माथिल्लो तामाकोशीको ६ वटै युनिटबाट विद्युत उत्पादन सुरु, बिहीबारदेखि आम्दानी गर्न थाल्ने
काठमाण्डौ । राष्ट्रिय गौरवको हालसम्मकै ठूलो जलविद्युत आयोजना माथिल्लो तामाकोशीले पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन थालेको छ। योसँगै बिहीबारबाट आयोजनाले औपचारिक रुपमा विद्युत बिक्रीबाट आम्दानी गर्ने भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले माथिल्लो तामाकोशीबाट विद्युत खरिदबापतको भुक्तानी आउँदो बिहीबारबाट दिने भएको हो। सोही दिनदेखि...
विद्युत बिक्रीको आम्दानी घट्दा बरुण हाइड्रोपावरको नाफामा गिरावट
काठमाण्डौ । बरुण हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चौथो त्रैमासको परिस्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। समीक्षा अवधिमा कम्पनीले २२ लाख ३० हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ। जुन अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा ६५.२२ प्रतिशतले कम हो। अघिल्लो वर्ष कम्पनीले ६४ लाख १४ हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ। चौथो...
नेपाल हाइड्रोको नाफा २६.३९%ले घट्यो, ईपीएस रु. ७.०४
काठमाण्डौ । नेपाल हाइड्रो डेभलपर लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चौथो त्रैमासको परिस्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। समीक्षा अवधिमा नेपाल हाइड्रोले २ करोड १० लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ। जुन अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा २६.३९ प्रतिशतले कम हो। अघिल्लो वर्ष कम्पनीले २ करोड ८५ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ। चौथो...
ङादी ग्रुपले २ जलविद्युत आयोजनाको सेयर किन्ने, कुन–कुन ?
काठमाण्डौ । ङादी ग्रुप पावर लिमिटेडले २ वटा जलविद्युत आयोजनाको सेयर किन्ने भएको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको मंगलबार बिहान बसेको बैठकले सुपरमाई ए जलविद्युत आयोजना र माइखोला क्यास्केड आयोजनाको सेयर किन्ने निर्णय गरेको हो। ङादी ग्रुपले सुपरमाई ए जलविद्युतको ७६.५८ प्रतिशत सेयर किन्ने निर्णय गरेको छ। यो ९.६ मेगावाट क्षमताको आयोजना हो। यो...
अपर बलेफी जलविद्युत् आयोजना अन्तिम चरणमा, दसैँअगावै परीक्षण गर्ने तयारी
काभ्रे । सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका–३ स्थित ३६ मेगावाट क्षमताको अपर बलेफी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन सो आयोजनाको निर्माण कार्य ९७ प्रतिशत सम्पन्न भएको अपर बलेफी हाइड्रोपावर कम्पनीका अध्यक्ष उमेश कसजुले जानकारी दिए। आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् दसैँअगावै परीक्षण...